उनीहरूको फोनमा yapping घनिष्ठ छन् भने पढाई हुँदा तपाईँको फोकस कोयम राख्न लगभग असंभव छ, ठूलो हँसिलो हल्लाएर, डिलिवरी खाएर, वा सामान्यतया तबाही को अनावश्यक मात्रा सिर्जना गर्ने। कहिलेकाँही, पुस्तकालयको शान्त कुनामा अध्ययन गर्न अध्ययन गर्न सम्भव छैन। तपाईंले यसलाई र कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यो फिट गर्नु पर्छ! यही कारणले तपाईंलाई आवश्यक छ, आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण चीजमा तपाईंको क्षेत्रलाई मद्दत गर्न यी अनुप्रयोगहरू संगीत अनुप्रयोगहरूको आवश्यकता पर्दछ।
संगीतमा अध्ययन गर्ने प्रशंसक होइन? बरु यी सेतो शोर अनुप्रयोगहरू जाँच्नुहोस्!
हीरो छविहरू / गेट छविहरू
निर्माता: Spotify, लिमिटेड
विवरण: iTunes मा एक लाख गीतहरू डाउनलोड गर्न र प्लेलिस्ट सिर्जना नगरी केही राम्रो lyric-free अध्ययन संगीत खोज्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि Spotify तपाईंको जवाफ हो, मेरो साथी। निःशुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्, "Genres and Moods" ब्राउज गर्नुहोस् र "फोकस" छनौट गर्नुहोस्। तपाईं भित्र हुनुहुन्छ। सूचीबद्ध प्लेलिस्ट मध्ये कुनै पनि तपाईंलाई लेजर-जस्तै फोकस बनाए राख्दा तपाईंको अर्को प्रश्नोत्तरी, मिडटरम वा फाइनलका लागि प्रिन्डिङ गर्दा मद्दत गर्नेछ। योग र ध्यान पटरिहरु लाई क्लासिकल बीटबाट छनौट गर्नुहोस्। र जब तपाईं पढाई हुनुहुन्न भने , यसलाई तपाईको मनपर्ने ट्युन्समा जाम गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
किन खरिद गर्नुहुन्छ? सबैले Spotify लाई माया गर्छन्। तपाईं कबिलियन गीतहरू र प्लेलिस्टहरूको लागि तत्काल, निःशुल्क पहुँचलाई हराउन सक्नुहुन्न। साथै, अन्य व्यक्तिका प्लेसूचीहरू ब्राउज गरेर नयाँ अध्ययन संगीत खोज्न रमाइलो छ।
निर्माता: पाण्डोरा मिडिया, इंक
विवरण: यदि तपाईंले पन्डोरा रेडियोको बारेमा सुन्नुभएन भने, तपाइँलाई हेर्नको लागि आवश्यक छ, किनभने तपाईं एक चट्टानमा बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका लागि यो एपमा नयाँ को लागी, यो सजिलो छ, वास्तवमा। कलाकार, गीत, संगीतकार वा शैली र पानडोराको नाममा टाइप गर्नुहोस् "स्टेसन" पप अप गर्छ जुन त्यो शैलीसँग समान संगीत बजाउँछ। यस नि: शुल्क खाताको साथ 100 व्यक्तिगतकृत रेडियो स्टेशनहरू सिर्जना गर्नुहोस्। कुनै विज्ञापन वा विज्ञापनहरूको लागि $ 3.99 मासिक सदस्यताको साथ पन्डोरा वनमा अपग्रेड गर्नुहोस्।
किन खरिद गर्नुहुन्छ? किनभने तपाईं एक कलाकारको नाम थाहा छ जसले एक अर्थ ध्वनिक गिटार बजाउँदछ, तर तपाईंले सीडी किन्नुभएन किनकि ... सीडीहरू किन खरिद गर्नुहुन्छ? तपाईं उनको अधिक संगीत सुन्न चाहानुहुन्छ। र यसको साथ अन्य संगीत। साथै, तपाईं नयाँ र रोचक कलाकारहरू र शैलीहरू पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ जुन तपाईले पहिले पनि अनुभव गर्नुभएन। यहाँ शैली र कलाकार द्वारा अध्ययनको लागि उत्कृष्ट पेंडोरा स्टेशनहरूमा एक सूची हो। मजा लिनुहोस्।
विवरण: यो एप "मोजार्ट" प्रभाव मा पूंजीकरण गरिएको छ, अल्फ्रेड ए Tomatis द्वारा एक शब्द, जो एक प्रकार को विकार को मदद को लागि मोज़ार्ट को संगीत को उपयोग को एक शोध द्वारा संबोधित शब्द। उनको दावी? मोजार्टले तपाईंको IQ लाई बढावा दिन्छ। जबकि उनको अनुसन्धान सख्त परीक्षण अवस्थाहरू अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका सेटिङहरूमा परीक्षण गरिएको छैन, पृष्ठभूमिमा खेल्ने 100 भन्दा बढी विभिन्न क्लासिकिकल रचनाहरूको अध्ययनले तपाईंलाई कुनै पनि तरिकामा चोट पुर्याउँदैन। वास्तवमा, शोधले सुझाव दिन्छ कि अध्ययनको लागि सबैभन्दा राम्रो संगीत lyric-free हो , र यी क्लासिकल टुक्राहरू निश्चित रूपमा बिल फिट हुन्छ।
किन खरिद गर्नुहुन्छ? यदि तपाइँ Spotify वा Pandora को चकलेट प्रकृति को केहि बक्से मा भरोसा बिना ग्रिड गरिएको अध्ययन संगीत चाहानुहुन्छ (तपाईंले कहिल्यै थाहा पाउनु भएको हो कि तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ), त्यसपछि एक चोटी डाउनलोड गर्न को लागी विशुद्ध रूपमा Tchaikovsky, Beethoven, Pachelbel को लागि समर्पित, र हाँ, मोजार्ट, हो तपाईंको अध्ययन वातावरण सुरक्षित गर्न एक उत्कृष्ट तरिका।
निर्माता: गीतजा मिडिया, इंक
विवरण: Songza मजा र प्रयोग गर्न सजिलो छ। Spotify र पेंडोरा जस्तो, Songza शैली, कलाकार, आदिमा आधारित संगीत स्ट्रीम प्रदान गर्दछ तर इन्टरफेस हास्यास्पद सरल छ। मङ्गलबार बिहान उठ्दै सही। निर्णय गर्नुहोस् कि तपाईं कामका लागि संगीत सुन्न चाहनुहुन्छ, आनन्द उठाउँदै, विश्वास महसुस गर्दै, ड्राइभिङ, स्नानमा गाईने आदि। शुक्रबार राति बाहिर जानुभयो? राम्रो! तपाईंको "ठिक" साथीहरूलाई मनोरञ्जन गर्न पूर्व-ढाँचा गरिएको संगीत चयन गर्नुहोस्, ढिलाइ, प्रेम र रोमान्स, एक क्लबमा नृत्य, वा अरूलाई तपाईंको रात ल्याउँदछ। ओह। अनि तपाईलाई अध्ययन गर्न आवश्यक छ? उत्कृष्ट। अध्ययनका अवस्थाहरू (लाइब्रेरीमा, तपाईंको कारमा बस्न, साथीहरूको साथ काम गर्दै) को एक छनौटबाट छनौट गर्नुहोस्, तपाईंको अध्ययन सत्रमा सही मन छ भनेर सुनिश्चित गर्न।
किन खरिद गर्नुहुन्छ? Songza प्रयोगकर्ताहरूले माथिको Spotify र पेंडोरालाई मूल्याङ्कन गर्छन्। र ती दुई स्ट्रीम स्टुडियो अध्ययन एप्स जस्तै, तपाईं विज्ञापन र विज्ञापनहरू छुटकारा पाउन $ 3.99 / महिनाको लागि अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। अझ राम्राे।
पढ्ने व्यापक कार्यपत्र 1
शब्दावली फ्लैश कार्ड कसरी बनाउने
3 लेखकको टोन बाहिर चित्रण गर्न ट्रिक्स
अनिवार्य ल्याटिन संगीत एल्बमहरू
मिलसेल्वेनिया विश्वविद्यालय पेंसिल्वेनिया प्रवेश
पूल बबल वजन - तिनीहरू बिभिन्न हुन सक्छन् जस्तै सावधान रहनुहोस्
कसरी गर्ने 'बनी हप'
साबुन कसरी काम गर्दछ?
शीतमा कसरी मधुमक्खी बिरुवा राख्छन्
मंगा साइबर्ग केटी कसरी आकर्षित गर्ने
प्राचीन माया वास्तुकला
प्रतिशत कसरी गणना गर्ने
ज्योतिषको बारेमा बाइबलले के भन्छ
आधारभूत विभाजन तथ्य कार्यपत्रहरू 20 मा
"RSVP" को अंग्रेजी अनुवाद के हो?
आधारभूत जापानी: रेस्टुरेन्टमा आदेश
कालो इतिहास महिना - अफ़्रीकी अमेरिकी आविष्कारकहरू
डी एन्जेलो शीर्ष दस सबै भन्दा ठूलो हिट्स
साधारण गलत धारणाहरु को ईसाई जीवन को बारे मा
एक व्यवहार अनुबंध र व्यवहार निगरानी उपकरण
वन सर्वेक्षण विधिहरू - दूरी र एन्जिल्स
RGB बाट TColor रूपान्तरण गर्नुहोस्: डेल्फीको लागि अधिक TColor मानहरू प्राप्त गर्नुहोस्
व्हाइट लाइटमा कल गर्दै
ल्याट नामको अर्थ लैटिन वा ग्रीकमा